स्वप्न सुमन भन्छन् – ‘मन परेकी केटीलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न नसकेपछि गीत गाएँ’
धरानस्थित सैनिक आवासीय महाविद्यालयबाट २०६९ सालमा एसएलसी दिएँ । त्यो समयको एसएलसी अहिलेको एसईई भएको छ । एसएलसीलाई त्यतिबेला आइरन गेट भनिन्थ्यो । त्यसैले निकै मेहनत गर्नुपथ्र्यो ।
त्यसैमा पनि म स्कुलको एसएलसी दिने दोस्रो ब्याच थिएँ । अघिल्लो ब्याचका साथीहरुले एसएलसीमा राम्रो अंक ल्याउनु भएको थियो । मेरो ब्याचका सबैजनाले राम्रो अंक ल्याउनै पर्ने दबाब थियो । त्यसैले मैले निकै मेहेनतका साथ पढेँ । त्यसैले डिस्टिङ्सन अर्थात विशिष्ट श्रेणीमा एसएलसी उत्तिर्ण गरेँ पास गरें ।
मलाई साइन्स पढाउने बुबाको जिद्धी
राम्रो नतिजा ल्याएर एसएलसी उत्तिर्ण भएपछि घरपरिवार र नातागोताले विज्ञान विषय पढ्न सल्लाह दिए । बुबाले त मलाई विज्ञान विषय पढाउनका लागि जिद्धी गर्नुभएको थियो । तर, म गणितमा कमजोर थिएँ । त्यसैले साइन्स पढ्ने आँट गरिनँ । गणितीय हिसाब नभएको विषय खोज्दै जाँदा होटेल म्यानेजमेन्ट र टुरिज्म विषय पाएँ । त्यसैले यी विषयमा अध्ययन गर्न काठमाडौँको बसुन्धारास्थिति ओरियन्ट कलेजको कक्षा ११ मा भर्ना भएँ ।
कलेजमा मेरा खासै धेरै साथीहरु थिएनन् । त्यसैले पनि होला साथीहरुसँग योजना बनाएर घुम्न जाने, कलेज बंक गर्ने सोच कहिल्यै आएन । सोझो, खासै अरुसँग नबोल्ने मेरो बानी थियो ।
कक्षा १२ मा पढ्दा त्रिशुलीमा ¥याफिङ पनि गएको थिएँ । मलाई पौडी खेल्न आउँदैन त्यसैले पानी देख्दा डर लाग्छ । ¥याफिङ खेल्दा सबै साथीहरु ढुङ्गाबाट हाम फाले तर, मैले फालिन । साथीले ‘माथी तान’ भनेर हात मागेको के थियो ! पानीमा तान्यो । त्यसरी तानेको म त डुबेँ भनेर सोचेको थिएँ । तर, तैरिएर दंग परेको थिएँ ।
मेरो कलेजमा कहिलेकहिँ साथीहरुबीचमा झगडा हुन्थ्यो । तर, मैले त्यस्ता कुरामा ध्यान नै दिन्न थिएँ, टाढा हुन्थेँ । मेरा साथीहरु पनि त्यस्तै थिए । कलेजमा ज्ञानी विद्यार्थी भनेर चिनिन्थे । कलेज जाने पढ्ने मात्र काम थियो । कलेजको असाइन्मेन्टको लागि उपत्यकाका विभिन्न होटेलमा जान्थेँ ।
कक्षा १२ मा पढ्दा त्रिशुलीमा ¥याफिङ पनि गएको थिएँ । मलाई पौडी खेल्न आउँदैन त्यसैले पानी देख्दा डर लाग्छ । ¥याफिङ खेल्दा सबै साथीहरु ढुङ्गाबाट हाम फाले तर, मैले फालिन । साथीले ‘माथी तान’ भनेर हात मागेको के थियो ! पानीमा तान्यो । त्यसरी तानेको म त डुबेँ भनेर सोचेको थिएँ । तर, तैरिएर दंग परेको थिएँ । यो बेला लाइफ ज्याकेटले पानीमा डुबिदैन भन्ने थाहा थिएन । अनि पानीमा १०–१५ मिनेट खेलेर रमाइलो गरेको थिएँ ।
प्रेम प्रस्ताव राख्न नसकेपछि गीत गाएँ
टिन एज भएर पनि होला कलेज पढ्दा चन्चले स्वभावको थिएँ । मेरो कलेजमा राम्रा–राम्रा केटी साथीहरु थिए । तिनै मध्ये कक्षाकी एउटी केटी मन पराएको थिएँ, तर दुई वर्षसम्म उसलाई प्रेमप्रस्ताव राख्न सकिनँ । त्यही कुराको महशुस गरेर ‘कसरी भनुँ तिमीलाई…..’ गीतको शब्द कोरेँ । कलेज सकिएपछि त्यो गीत गाएँ ।
प्लस टु पढ्दै गर्दा मैले कभर गीतहरु गाउँथे । बिहानको कलेज थियो । कलेज छुट्टी भएपछि धेरै समय स्टुडियोमा नै बस्थेँ। कभर गीत रेकर्डिङ गर्ने, गीतको शब्द कोर्ने, गितार र विभिन्न बाजाहरु बजाउन सिक्थेँ । पछि–पछि स्टुडियो मै खाने, बस्ने गर्न थालेँ । एक पटक यस्तो पनि भयो बिहान बोर्डको परीक्षा थियो । म राति १२ बजेसम्म स्टुडियोमा नै थिएँ । रातिको समय शान्त हुने भएकाले काम गर्न रमाइलो लाग्थ्यो ।
कभर गीत गाएँ पनि त्यति धेरै चिनिएको थिएन । कलेजका केही साथीहरुले मेरो गीत सुनेका थिए । राम्रो छ, भन्थे । कलेजका शिक्षकहरुले गीत–संगित भन्दा पढाईमै ध्यान दिन भन्नुहुन्थ्यो । तर, मैले पढाईलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको थिएँ । प्लस टु राम्रो नम्बर ल्याएर पास गरेँ । त्यसपछि संगीतलाई नै निन्तरता दिएँ । व्यस्तताका कारणले औपचारिक शिक्षालाई निरन्तरता दिन सकिन ।
#सैनिक आवासीय महाविद्यालय